Su’aashii iyo safarkii nafsadda! – Maandoon
Su’aashii iyo safarkii nafsadda!
February 3, 2017 Cabdullaahi M. Cawsey 0 Comment
Sakariye saaxiib shalay waxaad asxaabtaada Facebook weydiisay su’aal qoto dheer oo ku saabsan nuxur ahaan qofka wuxuu yahay ama ka samaysan yahay. Su’aashaada waxay ahayd sidan: qofku muxuu yahay, ma jirbaa mise waa ruux?
Marka hore hambalyo, waayo su’aashan iyo kuwa la midka ah waxaa badanaa is weydiiya ama ku mashquula dad faro ku tiris ah oo maqaadiirta u qoondaysay in ay daawadaan muuqaallada qarsoon ee nolosha. Dadka noocan ah badanaa waxay ku mashquulaan su’aalo asal u ah waalida nolosha ka socota, halka dadka intooda badan ku qanacsanyihiin baashaalka iyo beenta magaalooyinka ama marfishyada ka shidan waqtigaas la joogo!
Muddo aad u dheer ayaa su’aasha noocan ah saaxiibo ahayn. Mudadaas su’aashan waxaan isla marnay safaro dhaadheer oo aan ku baadi-goobayno jawaab dhab ah oo aan kaga caafimaadi karno buufiskii iyo baqdintii aan ka dhaxalnay saaxiibtinimadii noo dhaxaysay. Qoraalkan wuxuu soo koobayaa waayo-aragnimadii dheerayd ee safarka noocaas ah lagala kulmay.
Safarkaas wuxuu ku saabsanaa booqashada saddex jiho ama aag oo dadka su’aasha noocan ah la saaxiiba ay ka qaraabtaan. Goobtii ugu horreeysay ee aan booqannay waxay ahayd doodaha ka socda mawlacyada iyo masaajidyada.
Sida badan waayadan danbe waxaa mawlacyada iyo masaajidada ku gaardiya rag mararka qaar su’aashan kaga jawaaba qaab qar iska tuurnimo ah. Ragga noocan ah waxay bulshadu u taqaanaa culumada diinta. Inta badan jawaabahooda waxay cuskan yihiin doodo diimaysan oo aan laga murmi karin. Jawaabtooda oo kooban oo misana koombo ku jirta waa sidan: qofku waa ruux laga soo xawilay lawxul maxfuudka, taas oo lagu afuufay jir laga soo dhiraan-dhiriyay dhoobo iyo dhiiqo la isku dhalaaliyay.
Dadka sidaadoo kale daawada muuqaallada qarsoon ee nolosha, jawaabta noocan ah waxay ka qaadi karaan madax-wareer iyo wis-wis badan. Tusaale ahaan, qofku wuxuu ka wis-wisi karaa dhoobada iyo dhiiqada dhulka laga soo dhiraadhiriyay asagoo isla markaana qaab wareersan u caashaqi kara qaybta ruuxda ah ee lagu afuufay. Wareerka iyo wis-wiska noocan ah waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo wax ku biiriyay waalida ka socota nolosha haddda taagan.
Haddii jawaabta noocan ah qaab duuduub ah loo qaato waxaa dagaal lama filaan ah ka dhex qarxi karaa qofka iyo jirkiisa. Qofku wuxuu si hoose u aamini karaa inuu yahay najis-najis dhalay! Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa xer badan oo dhagxaan ku murxiya xubnaha tarankooda si ay u suuliyaan najaasada iyo wasaqda u diiday in ay daahir noqdaan. Taariikhda xerownimada adduunka waxaa ka xusan rag badan oo ku xanaaqay ama qarxiyay jirkooda, si ay u xoreeyaan ruuxdooda xanniban!
Markii jawaabta noocan ah aan ku wareernay ama aan ka wis-wisnay, waxaan u qalab qaadannay safar kale oo aan ku beegsanayno goob labaad oo ay ku badanyihiin ragga iyo dumarka adeegsada maskaxdooda iyo muruqooda marka laga jawaabayo su’aashan. Dhanka kale goobtan waxaa ka ag dhow badweyn ay ku dabaashaan dhamaan ragga iyo dumarka daneeya in su’aashan qaab falsafadaysan looga jawaabo.
Jawaabta guud ee goobtan lagu hayo waa in qofku nuxur ahaan yahay jiir iyo jeeni malaayiin sano ku soo jiray safar dheer oo midabyo badan lahaa- evolutionary biology. Jawaabta noocan ah qofku wuxuu ka qaadi kara qalbi jab iyo qarracan waayo qofku wuxuu ku baraarugayaa in asaga iyo kaneecada ay ka simanyihiin darajada jiritaanka qofnimo inta lagu guda jiro safarka nolosha. Jawaabta noocan ah kuma aynaan qancin, waayo gunnimo ka weyn majirto in dad waaweyn oo gar iyo gafuur leh in jiritaankooda lala garab simo Kaneecada meelaha ka calaacasha!
Dhanka kale jawaabta noocan ah waxay dunida casriga ah ka curisay nolol cakiran oo aad uga hooseysa darajooyinka dabiiciga ee qofka bani’aadamka ah ka gaari karo dunta hoose ee dadnimadiisa. Tusaale ahaan, waddamada horumary ee reer Galbeedka waxay dadku si dadban u aaminsanyihiin in nuxurka nolosha iyo dhabnimada qofka lagu qiimeeyo yihiin wixii markaas muuqda ee la taaban karo- matter. Arintan waxaa ka dhashay dhaqan iyo dhaqaale laga dhaxlay xanuunno badan oo dhimirka ah. Dhaqanka noocan ah waxaa lagu magacaaba- materialism.
Dadka sidaadoo kale daawada muuqaallada qarsoon ee nolosha kuma qanci karaan in qofnimadooda lagu soo koobo shilimaadka ka sharqamaya jeebkooda waayo dadkaas waxay dareemaaan waxyaabo badan oo u baaqaya sida codadka macaan ee muusika, dhoola-caddaynnta qurxoon ee caruurta iyo waliba fariimaha ku hoos qarsoon sharqanta geedaha iyo sheekada shinbiraha! Baaqa noocan ah waxaa afka qalaad lagu dhahaa- qualia oo ah dhadhan ku lammaansan jiritaanka noolaha isla sheekaysta sida bani’aadamka oo kale- subjective experiences !
Maadaama jawaabo qabyo ah aan ka helnay goobahaas kor ku xusan, waxaan go’aansannay in baadi-goobkii aan sii wadano annagoo beegsanayna goob saddexaad oo naloogu sheegay in ay ku dhuuntaan awliyada ilaahay ee la dhuunta jawaabta su’aashan. Markii aan goobtii tagnay, dumarka iyo ragga ka tarjuma awliyada ilaahay waxay nagu wargaliyeen in erayadii aan soo maqalnay sida jir iyo ruux daaqada aan ka tuurno waayo sida ay qabaan adeegsiga erayada iyo luqadaha waa laqdabada ugu weyn ee naga hortaagan jawaab dhamaystiran oo su’aashan looga bogsan karo.
Tarjumaankii ugu horreeyay ee iiga tarjuma awiliyada ilaahay wuxuu ahaa muqayil weyn oo si kadis ah aan kula kulmay mar aan joogay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Muqayilkaas wuxuu muddo soddon sano ka badan arday u ahaa mid ka mid ah awliyada ilaahay ee caanka ka noqotay Geeska Afrika. Haddii aad u baahantahay faah-faahin ku saabsan la kulankii muqayilkaas waxaad dib u aqrin kartaa maqaalkii Ceebaha Caqliga ee labo sano ka hor la daabacay!
Tarjumaankaas wuxuu noo sheegay in qadar daqiiqado ah aan aamusno, dabadeedna aan dhageysanno garaaca wadnaheena, shanqarta banaanka ka socota, annago isla markaa dareemayna kuraasta aan dabada ku haynno iyo hawada afkeenna ka baxaysa. Aamusnaanta noocan ah waxaa la socota baraarug ku saabsan qofka aad tahay dhab ahaan. Waxaad tahay dhamaan waxa dhacaya daqiiqada markaas la joogo. Dhammaan waxa dhacaya daqiiqada markaas la joogo waxay ka dhex dhacayaan caalam muuqda iyo waliba caalamyo qarsoon oo ciidaas ka badan.
Sidaa daraadeed, tarjumaankii wuxuu noo sheegay in aan nahay caalamka muuqda iyo waliba caalamyada qarsoon.
Jawaabta noocan ah caqligeena uma diyaarsaneen waxaana ka qaadnay wareer iyo madax xanuun hor leh. Balse muddo dheer ka dib, waxaan ku baraarugnay in caqliga caadiga ah uusan garan karin qofka aad tahay dhab ahaan. Caqliga wuxuu garan karaa oo kaliya calaaamad ka mid ah jiritaaankaada.Sidaa daraadeed, jirka iyo ruuxda waa calaamado ka mid calaamadaha ciiddaas ka badan ee tilmaamaya qofka aad tahay dhab ahaan.
Haddaba su’aashii hore ee safarka igula jirtay waxay waddada ku dhashay su’aal kale oo sixir ka daran. Waana su’aasha ah: Haddii tarjumaannada awliyada ilaahay ku taliyeen in fasax loo diro caqligeena, sidee lagu aamini karaa ama lagu aqoonsan karaa waxyaabaha aan ogaanno sida qofka aan nahay?
Su’aashii hore, su’aashaan waddada ku soo dhalatay iyo anigaba wali waxaan ku wada sugannahay goobaha ay ku dhuuntaaan awliyada ilaahay. Inkastoo wali aynaan helin jawaab dhamaystiran haddana waxaan ku kalsnoonnahay in jawaabta su’aashan ay ku dhex jirto qaababka badan ee awliyada ilaahay- Mystics u khalaaweeyaan. Sidaa daraadeed waxaan rajeynayaa in marar badan aad la sheekaysan doontid awliyada ilaahay adigoo dusha sare ka qishaya jawaabaha ay la dhuuntaan ee ku saabsan su’aashii aad na weydiisay!
Cabdullaahi M. Cawsey.
Asalka kooxaha muslinka →
Soo Ifbaxa, Cimriga iyo Geerida Fikradaha
July 22, 2017 Mohamed Adaani 0
Xadka Riddada: Been Fakatay Runi Ma Gaadho!
August 15, 2016 admin 6
Magaaladaydii Baan Nacay!
September 10, 2016 Cabdullaahi Muuse 0